Fetim-pirenena: fizarana sakafo nataon’ny Lehiben’ny Faritra Boeny | Région Boeny
Fetim-pirenena: fizarana sakafo nataon’ny Lehiben’ny Faritra Boeny
29 juin 2016 A La Une, Actualité
Ankoatra ny fanomezana sakafo ho an’ny mpiasan’ny Faritra isan-taona, izay nahitana vary, menaka ary hena natao ny Zoma 24 jona teny amin’ny Lapan’ny Faritra Mahajanga Be dia, tsy nanadino ireo olona marefo ihany koa ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar, ka nahatsiaro manokana ireo voafonja, beantitra sy kamboty ary ireo zaza mania.
Araka izany dia ny sabotsy 25 jona 2016 lasa teo, notron’ireo mpikambana ao amin’ny kabinetrany, notarihin’ny Lehibeny Atoa Hemedy, no nanoloran’ny Lehiben’ny Faritra vary gony telo, filao gony telo ary siramamy gony iray, tao Marofoto.
Nitohy teny amin’ny fitaizàna zaza kamboty eny Mangarivotra sy tany amin’ny fitaizàna zaza mania etsy Amborovy ny fanolorana vary gony iray, siramamy gony iray ary filao gony iray isak’ireo toerana ireo.
Ankoatra ireo dia hisy ny taratasy fifanarahana izay ho soniavina atsy ho atsy hifanaovan’ny Faritra Boeny sy ny ao amin’ny fitaizàna zaza mania etsy Amborovy mikasika ny fanamboarana ireo foto-drafitrasa filalaovana Basket-ball izay efa simba, sy ny varavarana lehibe fidirana mankao.
Vonona ihany koa handray an-tànana amin’ny fanampiana sy fikarakarana an’ireo zaza kamboty eny Mangarivotra izahay hoy ny Lehiben’ny Faritra Boeny, tamin’ny solo-tenan’ny Kaomina Mahajanga izay misahana io ivo-toerana io.